"Kantipur Blues" jasto bhayo ni ta! shire ko katha chappinu pani ahobhagya rahecha :P , aba arko pali chai shuddha shuddi, bhasa, byakaran sabai chatta parera pathaidinu na yeso byakaran ma 32 lyaune sampadak le ni sikos :P , tespachi ta kaso nachaplan ra!
नेपालियनजीले नै हो क्यारे, एकताका आफ्नो लेख छापेन भनेर 'मेरो संसार'ले खेदो गर्दै 'दौंतरी' खोल्नुको 'उपादेयता' प्रष्ट्याउनुभएको थियो । अहिले 'कान्तिपुर'को खेदो ! पहिला राम्रो भन्दै छाप्न अनुरोध गर्ने अनि छापेन भने खेदो खन्ने, यो प्रवृत्ति ठीक लागेन है नेपालियनजी !
नेपालका पत्रिकाहरू भारतीय समाचार च्यानलहरूभन्दा कम छैनन् । अधिकांश पत्रिकाहरूको पहिलो प्राथमिकता भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नु रहेको छ । अर्थात् भारतीय विस्तारवादलाई मलजल गर्ने समाचार, लेखहरू प्रकाशित गर्नु । च्यानलहरूको हालत पनि उस्तै छ । भारतीय अभिनेता-अभिनेतृहरूको समाचार टुटाउनु यिनीहरूका लागि पापसरह हुन्छ । एकताका दि हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण पोष्टलाई भारतीय लगानीको पत्रिका भनेर विरोध गर्ने कान्तिपुरसमेत भारतीयहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा शुरु गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । अब यस्ता पत्रिकाहरूबाट नेपाल र नेपालीहरूको हीत होला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । कान्तिपुरकै कुरा गर्ने हो भने यसको सहप्रकाशन 'साप्ताहिक' हेर्नुस्, अश्लिल पत्रिकामा परिणत भइसक्यो । यो पत्रिकालाई त म 'स्लो प्वाइजन'को संज्ञा दिन्छु; नेपालीहरूको 'ब्रेनवाश' गर्ने ।
अँ विद्यालयको कुरा त थाहा भएन, तर अहिले तपाईंको नेपाली व्याकरण अँग्रेजीले क्वाप्लाकुप्लुक खाइदिएजस्तो छ नेपालियनजी । :) यस सामग्रीमा अशुद्ध शब्दमात्र ५० भन्दा बढी छन् । हतारै भएपनि यति साह्रो अशुद्धि त नहुनुपर्ने हो । कान्तिपुरमा समाग्री छपाउन हफ्ता दिन लगाएर सच्याउन सक्नेले दौंतरीका लागि पनि केही समय लगाएर सामग्री प्रकाशित गर्नुभएको भए राम्रो हुनेथियो । मेरो सित्तैको सल्लाहमात्र... मीठो हुन्न भन्ने थाहा छ ।
I wrote this blog but did not elaborate much. That might be the reason it gave different message. Prelude, its justafiction, I won't say it is kantipur blues. So obviously I wont need additional time to find to teach lesson for 32ers ;)
लेखमा मैले प्रष्ट नभने नि यो लेख एउटा कथा मात्र हो। नं त मैले तारी गाइको लेख लेखेको छु न त सिरेकै लेख कान्तीपूरमा आएको छ। त्यसैले यो कथाका पात्र र भाव सबै काल्पनिक भएकोले पुष्पजीको ठम्माइ अली गलत ठाउंमा परेकको अनुभव गरेको छु। कान्तीपूर नाम चलेको पत्रिका भएकोले उक्त नाम चयन गरेको हुं,छाप्नको लागी कान्तिपूरमा कुनै अनुरोध पठाएको छैन।
तपाइले थुप्रै अशुद्द औलाइदिनु भएकोमा धन्यबाद। दौंतरी आफैं ब्लग चौतारी भएकोले दौंतरी कुनै ब्लगको प्रतिपर्धासंग कहिं कतै दांजिएको छैन, दांजिने पनि छैन। अन्य नेपाली ब्लगसंग कुम जोडेर नेपाली ब्लग जगतलाइ माथी उठाउनु नै दौंतरीको सफलता हो। दौंतरी किन खोलीएको हो त्यो दौंतरीको पहिलो ब्लग या यो लिंकमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।
माइसंसार ब्यक्तीगत ब्लग भएकोले उक्त साइटमा लेख छपाउने नछपाउने उमेशजी को सर्वाधिकार भएकोले उहांप्रती तिक्तता पोख्नु एउटा मुर्खता मात्रै हो। मेरो पहिलो लेखनै माइसंसारले छापेको थियो,त्यसमा त मैले अझ धन्यबादनै दिनुपर्छ। दौंतरीमै पनि आउने सबै लेखले ठाउं पाउंदैनन,लेख प्रकाशनको मर्म मैले पनि राम्ररी बुझेको छु। दौंतरी एउटा सामुहिक ब्लग भएकोले दौंतरीबारे मैले बोलेको कुरा नित्तान्त ब्यक्तीगत हो,दौंतरी बारे अन्य ब्लगरको धारणा भिन्न पनि हुन सक्छ।
ramro kuro rahechaaaaaaa
नाम यहाँ कान्तिपुरकै दिए पनि, कथाले निकै यथार्थ बोकेको छ । यहाँ यस्तै हुन्छ्, मन्त्रीको जुत्ता खोलाले बगाउँदा ब्यानर र फ्ल्यास न्युज हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले कासे मात्र पनि प्रमुख समाचार बनेर फोटो सहित हरेक पत्रिकाका मुख पृष्ठ बन्छन् । तर तारी गाइ जस्ता साधु र पिछडिएकाहरू सदैव पछाडी नै रहिरहन्छन् ।
यो कथाले एउटा सामाजिकता बोकेको मैले पाएँ । म कुनै समालोचक त हैन यद्दपी यि तारीगाइहरू अथवा तारीगाइ जस्ताका नगण्य कथाहरू पढिनु पर्छ, छापिनु पर्छ, ब्लगीनु पर्छ अनी हरेकले प्राथमिकता भित्र पार्न सक्नु पर्छ ।
यो सामाजिक क्रान्तीको समय हो । यहीँ बाटै किन सुरू नगर्ने ।
मैले 3-4 पटक पढेँ तर फेरि फेरि पढिरहन बाध्य छु । शायद फेरि पढ्नै पर्छ मैले अझ 2-4 पटक यो कथा ।
नेपालियन जीलाइ धेरै धन्यवाद ।
लौ बिष्णु जि को नछापिएको कथामा कमेन्ट छापिएन भन्नु भएको थियो झन २-२ वटा पो आएछ। ब्लगरबाट होस्ट गरिएका साइटमा कमेन्टको यो समस्या छ,तुरुन्तै कमेन्ट पोस्ट नभइ 'प्रोसेसिगं हुन सकेन' भनेर मेसज आउंछ पून पोस्ट बटन थिचेपछी भने बल्ल कमेन्ट प्रकाशित हुन्छ। गुगलले स्पाम रोक्न यस्तो गरेको हो कि प्राबिधीक समस्या हो मैले मेसो पाएको छैन।
कथा मन पराइदिनु भएकोमा बिष्णुजीलाइ धन्यबाद। कथा एउटा गाउंको लबज समातेर लेखिएको हुंदा कतिपय शब्दहरू नेपाली मूल भन्दा अली प्रिथक छन।
नेपालियनजीको अगाडि कथाकार राखेर पढ्नुहोला नि, अनि ठम्याइ सही ठाउँमै पर्छ कि !
हैन नेपालीयन जि, यो कथा कतै Jotare Dhaiba जि बाट प्रेरित त हैन ;)